वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्ससँगै उद्यमी पनि जन्माइरहेकाे छ
राेजगार उद्योग अन्तर्वार्ता
रमेश भारती काठमाडाैं, १८ वैशाख
नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नमा म्यानपावर व्यवसायीकाे भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर, पनि समाज र सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई हेर्ने नजर त्यति राम्राे छैन । यसमा केही गल्ती व्यवसायीकै छ भने कतिपय कमजाेरी सरकारकाे छ । ती के हुन् र कसरी याे क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ त ? यिनै विषयमा द रिभर ओभरसिर्सका सञ्चालक तथा युवा व्यवसायी रघुनाथ पुरीसँग शिलापत्रकर्मी रमेश भारतीले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश ः
कोरोना भाइरसको असर व्यापार व्यावसायमा कस्तो परेको छ ?
विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा ठूलाे आर्थिक असर परेको छ । यसको प्रभाव लामाे समयसम्म पर्ने देखिन्छ । कोरोना भाइरसले सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । व्यवसाय र आर्थिक क्षेत्रमा तरलता देखिँदा बेरोजगारी दरलाई बढोत्तरी हुनुका साथै उद्योग, उत्पादन, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन, होटल व्यवसायलगायत निर्माण व्यवसायमासमेत प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पर्छ ।
श्रम र रोजगारीको पाटोबाट हेर्दा काेरोना भाइरस नियन्त्रणपछि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
कोरोना भाइरसको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा धेरै परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । हाल देशमा विद्यमान बेरोजगारीको समस्या वैदेशिक रोजगारीले समाधान गरिरहेको छ । यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो ।
कोरोना भाइरसका कारण विदेशका रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदार फर्काए अझै बेरोजगारी बढाउने देखिन्छ । कोरोना भाइरसपछि भविष्यमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा विचलन उत्पन्न हुन सक्छ । नेपाल राजस्वमुखी अर्थव्यवस्था भएको देश हो। यसको दूरगामी प्रभाव पर्छ ।
रेमिट्यान्समा कस्तो असर पर्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले वार्षिक साढे ८ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउँछन् । यो सरकारले तथ्याङ्क हाे । चालू आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण रेमिट्यान्स स्वतः घट्ने देखिन्छ । सरकारले यो चालू आवमा ९ खर्ब रेमिट्यान्स आउने अनुमान गरेको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण साढे १ खर्ब रेमिट्यान्स घट्ने अड्कल गरिएकाे छ ।
हाल देशभित्र रहेको बेरोजगारी र स्वदेशमा राेजगारी गुमाएका कामदारसँगै ७ देखि १० लाख रोजगारी सिर्जना सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आए सरकारलाई श्रम र रोजगारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्नु मुख्य समस्या नै हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पार्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत धेरै नेपालीहरूको रोजगारी गुम्दै छ भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
सही हाे । कोरोना भाइरसले गर्दा प्रायः नेपालीहरू कार्यरत मध्यपूर्वका देश तेल र ग्यासमा आधारित अर्थतन्त्रमा छन् । कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रूपमा आएको मन्दीले तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै लकडाउनले गर्दा मध्यपूर्वबाट आप्रवासी श्रमिकको रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आँउछ । सेवा र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएर अगाडि बढिरहेका देशमा पनि रोजगारी कटौती हुन सक्छ । के कति संख्यामा रोजगारी कटौती हुन्छ भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा अन्य माध्यमका लागि काम भने सुरू गर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दीले गर्दा विदेशस्थित रोजगारदाताहरूबाट पनि तत्कालका लागि नयाँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना नहुने र केही समयका लागि कामदार कटाैती गर्न सक्छन् । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा आधारित नेपाली श्रम बजारलाई नकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिकको हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सुविधामा निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन् ?
रोजगारदाता कम्पनीले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट नै उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । उनीहरूले दिएको सुविधाका आधारमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन् । कोरोना भाइरसका आगामी दिनमा रोगजारदाता कम्पनीले आर्थिक मन्दी सुरू भएपछि खर्चसमेत कटौती गर्ने सक्ने अवस्था आउँछ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सुधिवा कटौती नहोस् भन्ने पक्षमा हामी छाैँ ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो ?
रोजगारदाता कम्पनीले दिएको सुविधाका आधारमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रक्रियामा द रिभर ओभरसिर्सले कामदार पठाइरहेको छ । सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेदेखि रोजगारदाता कम्पनीले दिएको सुविधामै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छौँ ।
फ्रि भिसा र फ्रि टिकट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा पहिलो कारण व्यवसायीबीचकाे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाे भने दोस्राे सरकारले रोजगारदाता मुलुक, रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल र समन्वयन नहुनु हाे । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका बारेमा रोजगारदाता देशसँग राम्रो परामर्श गर्नुपर्छ । योजना लागू गरेर मात्र हुँदैन, त्यसभित्रका समस्याका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।
नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले म्यानपावर व्यवसायी र कामदारको हकमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ?
कूटनीतिक नियोगले पछिल्लो समयमा आफ्नो स्राेत र साधनले भ्याएसम्म सहयाेग गरेका छन् । तर, कूटनीतिक नियोगमा सीमित स्रोत र साधन भएका कारण उनीहरूले चाहेर पनि श्रमिकका समस्या सुनुवाइ गर्न पाएका छैनन् । सके जति त काम गरिरहेका छन् । कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारी पनि कामदारप्रति जिम्मेवार नै देखिन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रका मुख्य समस्या के के हुन् ?
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुख्य समस्या भनेको सरकार र व्यवसायीबीच समन्वयकाे अभाव नै हाे । आज प्रविधिको युग हो । अब वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सबै काम अनलाइन र डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्छ । अझै पनि कतिपय कामहरू पुरानै ढाँचामा गर्नुपर्दा समय धेरै लाग्ने र झन्झटिलाे छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने भनेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अनलाइन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ । राज्यबाट विभिन्न समयमा जारी हुने ऐन नियम जारी गर्नुपूर्व वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीले पनि यो क्षेत्रका मुख्य समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सहयोग गर्छन् । सरकारले एकतर्फी रूपमा अनावश्यक र झन्झटिलाे प्रक्रिया लागू गर्नु प्रमुख समस्या हो । सरकार र व्यवसायीबीच कुनै कुरा लागू गर्दा छलफल र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई व्यवसायी र उद्योगीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
नेपालको १ नम्बर म्यानपावर व्यवसायीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ । पछिल्लो समय देशभित्र पनि युवा व्यवसायीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । व्यवसायमा जम्दै गर्दा केकस्ता समस्या झेल्नुभयाे ?
देशभित्र बेरोजगारी समस्या समाधान म्यानपावर व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारी कामदार पठाउने काम मात्र भइरहेको छैन, विदेश गएका नेपाली युवा सीप सिकेर फर्किँदै छन् । वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीपका आधारमा धेरै कामदारले नेपाल फर्किएर पेसा तथा व्यवसाय गर्न थालेका छन्। सरकारले विदेशबाट फर्किएर उद्यमी बनेका श्रमिकलाई पुस्कार दिँदै आएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले देशभित्र उद्यमी र सीप भएका श्रमिक उत्पादन गरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीले सरकारले बनाएका ऐन पूर्ण रूपमा पालना गर्दै राज्यलाई कर पनि तिरेका छन् । तर, सरकारबाट व्यवसायीलाई हताेत्साहित गर्ने काम हुन्छ । यो नै मुख्य समस्या हो । सरकारले देशभित्र दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । जसका लागि निजीक्षेत्रलाई तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ । यसो गर्दा व्यवसायी र कामदार दुवै पक्षको हित हुन्छ ।
सरकार जहिल्यै अभिभावककाे रूपमा रहनुपर्छ । व्यवसाय गर्न स्वच्छ, सहज र सुरक्षित वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसाय गर्दा राज्यका संयन्त्रहरूले एउटै विषयवस्तुमा विभिन्न प्रशासनिक झमेला दिने र व्यवसायीहरूलाई निरत्साहित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
सरकारमाथि दाेष थाेपरिरहँदा म्यानपावरकै कारण वैदेशिक रोजगारी व्यवसायकाे क्षेत्रमा विकृति बढेकाे कुरा पनि त सत्य नै हाे नि !
याे कुरा पहिचान गर्ने र यस्ता गतिविधलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै हाे । हामी हाम्राे ठाउँबाट सरकारलाई सहयाेग गर्न तयार छाैँ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सूचना श्रमिकसम्म पुर्‍याउन सरकारले अनलाइन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सजिलै रोजगारदाता कम्पनी, माग पत्रप्राप्त म्यानपावरसँगै सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास र रोजगारीमा जान चाहने कामदारकाे कामको प्रकृति, त्यहाँ पाइने सेवा सुविधा, कामगर्ने समयको पूर्ण रूपमा जानकारी पावस् । लिन सकून् । यति भएपछि श्रमिक रोजगारीका क्रममा समस्या पर्दा रोजगारदाता, म्यानपावार कम्पनी र कूटनीतिक नियोगको संयुक्त प्रयासमा कुनै एउटा निश्चित समयावधिमा समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले विगत ४ वर्षदेखि असंगठित एजेण्टलाई पूर्ण खारेजी गरेको छ । तर, कतिपय एजेन्टले अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । यसमा कडाइ गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सूचना, मागपत्र प्रमाणीकरण, कामका बारेमा, रोजगारदाता कम्पनीले दिने सुविधा वेबसाइट र अन्य केही माध्यमबाट सूचित गराए धेरै विकृत्ति रोकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १८, २०७७, १५:००:००
बाईबाई युएई ! मृत्यु जितेर स्वर्ग आइयाे
म्यानमारपछि यूएईबाट पनि आए नेपाली